युगसम्बाद साप्ताहिक - ‘डोक्लाम’मा आँसु चुहाउने ‘लिपलेक’ नदेख्ने ?
Wednesday, 10.23.2019, 11:19pm (GMT+5.5) Home Contact
‘डोक्लाम’मा आँसु चुहाउने ‘लिपलेक’ नदेख्ने ?
Tuesday, 08.08.2017, 06:22pm (GMT+5.5)
यतिबेला नेपालको बौद्धिक–कूटनीतिक क्षेत्र चीन–भुटान–भारतको त्रिदेशीय बिन्दु ‘डोक्लाम’मा भारत र चीनको विवादले रन्किएको छ । उनीहरु यो विवादमाथि अनेक टिप्पणी र विश्लेषण गरिरहेका छन् । यो विवादले विश्वको दोस्रो ठूलो आर्थिक शक्ति चीन र उदयिमान शक्ति भारतबीच युद्ध हुने सम्भावना औंल्याइरहेका छन् । अर्कोतिर युद्धको कुनै सम्भावना नभएकोे विश्लेषण पनि भैरहेको छ । डोक्लामको विवाद चीन र भुटानबीचको हो वा भुटान र भारतबीचको वा चीन र भारतबीचको ? यो एउटा पक्ष हो । खासमा सो क्षेत्रको सीमा विवाद चीन र भुटानकै हो । यी दुई मुलुकले सीमा विवाद समाधान गर्न लामो समयदेखि प्रयास गरिरहेकाा भए पनि हुन सकेका छैन ।
यसमा कारक भारत नै हो । भारतकै कारण भुटानले चीनसंग औपचारिक दौत्य सम्बन्ध समेत कायम गरेको छैन । भुटानको परराष्ट्र र सुरक्षा भारतको मुट्ठीमा छ । यसै कारण डोक्लाम हुँदै चीनले सडक बनाउन थालेपछि भारत आत्तिएको हो । खासमा डोेक्लामको अहिलेको विवाद भुटानको सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप हो । यो एउटा प्रसंग हो । यस्तै प्रसंग दुई वर्ष अघि चीन र भारतले लुटेकको नेपालको सार्वभौमिकता ।
यहाँ सन्दर्भ डोक्लामको हैन, नेपालको लिपुलेकको उठाउन खोजिएको छ । भारतले चीनलाई र चीनले भारतलाई भुटानको सार्वभौमिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाइरहेका बखत यी दुई देशले नेपालकको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप गरेको प्रसंग यहाँ स्मरणीय हुन आउँछ । वास्तवमा यी दुबै मुलुक अरुको सार्वभौमिकताको रक्षाका नाममा आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न चाहन्छन् भन्ने लिपुलेक र डोक्लाम प्रकरणले स्पष्ट पारेको छ । भुटानको सन्दर्भ पनि यही हो । यदि दुबै मुलुक अर्को स्वतन्त्र मुलुकको सार्वभौमिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने मनस्थितिमा हुन्थे भने नेपालको लिपुलेकलाई दुई देशको व्यापारीक केन्द्र बनाउने सम्झौता गर्ने थिएनन् ।
नेपालको सार्वभौमिक अखण्डतामाथि कसैले आँखा लगाएमा हामी सहँदैनौं भन्ने चीनले भारतसंग लिपुलेक सम्झौता गर्दा नेपालसंग सोध्नुपर्ने आवश्यकता नै ठानेन । भारत त यसै पनि हेपाहा भैहाल्यो । उसले आधाशताब्दीदेखि सो क्षेत्रको कालापानीमा सैनिक क्याम्प नै राखेको छ । कालापानीको ऐतिहासिक दस्तावेजले यो भूभाग नेपालकै हो भन्ने प्रमाणित भए पनि नेपालका दास मनोवृत्तिका शासकहरुको कमजोरीका कारण यो भूमिलाई भारत र चीनबीचको सीमाका रुपमा स्थापित गरिदिएको छ । यो विषयले नेपालीको रगत किन उम्लेन ? नेपालका बुद्धिजीवी–कूटनीतिज्ञहरुको मस्तिष्क किन तरंकित भएन । केही औंलामा गन्न नसकिनेहरुले मात्र लिपुलेक सम्झौताको बिरोध गरे । राजनीतिक नेतृत्व अन्तर्गत विपक्षमा रहेकाहरुले कराए । सत्तापक्ष मौन ।
डोक्लाम जस्तै लिपुलेक त्रिदेशीय बिन्दु हो र यसलाई दुई शक्तिशाली मुलुकले चाहने हो भने ठूलो विकास गर्न सक्छन् । यसको लाभ नेपाललाई पनि हुनेछ । तर, अर्काको भूमिलाई आफ्नै ठानेर सम्झौता गर्नु हेपाहा प्रवृत्ति त हो नै यससंगै नेपाली शासकहरुको मनोविकारग्रस्त मानसिकता अर्को कारण हो । भारतले आफ्नो दावी गर्दैआएको लिपुलेकलाई चीनले व्यापारीक केन्द्र बनाउने सम्झौता गरेर सदर गरिदियो । किनभने यो भारत र चीनलाई जोड्ने एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । यो क्षेत्र नेपालको पश्चिम सीमाभन्दा ५३ किलोमिटर पूर्वमा पर्दछ । अर्थात् नेपालको पश्चिमी सिमाना दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरा हो । त्यसभन्दा ५३.१२ किमि पूर्वमा लिपुलेक भञ्ज्याङ रहेको छ ।
यही भञ्ज्याङलाई मे १४–१५ २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणको अवसरमा चीन र भारतले ‘व्यापारीक बिन्दु’ बनाउने समझदारी गरी नेपालको सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर आँच पु¥याए । सो समझदारीबाट नेपालको सार्वभौमसत्तामा असर पर्ने गरी नेपाली भूमि भारतमा गाभ्ने प्रयास भएको छ । तर यो विषय जति उठ्नुपथ्र्यो अझै उठेको छैन । चिनीया पक्षबाट अनौपचारिक रुपमा यसमा सुधार गर्ने आश्वासन दिए पनि अहिले के भैरहेको छ पत्तो छैन ।
यतिबेला सबैको ध्यान डोक्लामतिरै छ । नेपाली भूमि दुई मुलुकले अतिक्रमण गरेर भारतीय भएको मान्यता स्थापित गरिसकेका छन् । हामी भने डोक्लामतिरै रुल्मुलिएका छौं । नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि कसैको पञ्जा पर्न नदिने भन्दैआएको चीनले नेपाली भूमि भारतलाई सुम्पिने काम गर्दा नेपालको कूटनीतिले केही गर्न सकेन । आधा शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि कालापानी र सो क्षेत्रमा भएको भारतीय अतिक्रमणको बिरोध भैरहँदा नेपालको सबभन्दा भरपर्दो मित्र देशले त्यस्तो काम गरेको छ, जुन कल्पना गर्न सकिन्थेन । यद्यपि यो विषय अहिले चर्चा सन्दर्भभन्दा बाहिर छ । चीनले गल्ती महसुस गरेको र उचित समयमा यसलाई सच्याउने आश्वासन दिएको चीन निकटस्थहरुले बताउँदै आएका छन् ।
लिपुलेकमा भारत र चीनबीचको समझदारी जानेर हो वा नजानेर अझै गम्भीर विश्लेषणको आवश्यकता छ । किनभने नेपाल र चीनबीच सन् १९६१ र सन् १९७९ मा सीमा सम्झौता भएको थियो । सीमा सम्झौता हुँदा लिपुलेक भन्ज्याङलाई नेपाल–चीन र भारतको त्रिदेशीय बिन्दु कायम गरिएको थियो । यद्यपि भारतले भने लिपुलेक भञ्ज्याङलाइ हालसम्म मान्यता दिएको छैन । लिपुलेक भञ्ज्याङको बाटो नेपालीहरू तिब्बत प्रवेश गर्ने नाका परम्परागत रूपमा रहँदै आए पनि भारतले उक्त क्षेत्रमा आफ्नो शैन्य गतिविधि बढाएपछि भने नेपालीका लागि लिपुलेक भञ्ज्याङ पूर्णतः बर्जित भएको छ । लिपुलेकभन्दा ५३ किमि पश्चिममा पर्ने लिम्पियाधुरा नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र हो भने लिपुलेक भञ्ज्याङबाट व्यापार आदान–प्रदान गर्न चीन र भारतले सम्झौता गर्न कसरी सक्छन् ?
यहाँ उठाउन खोजिएको विषय भारत र चीनको स्वार्थमा नेपाल र भुटान जस्ता मुलुक कति परिरहने हो । डोक्लामको विवाद दुई देशको अस्तित्व स्थापित गर्ने रणनीति मात्र हो । त्योभन्दा बढी केही हैन । उनीहरुबीच युद्धको कुनै सम्भावना छैन । जसरी लिपुलेकलाई भारत र चीनको सीमा मानेर दुई देशले व्यापार बढाउन नेपालको सार्वभौमिकतामाथि बुट प्रहार गरे भुटानको हकमा पनि त्यही हो ।